Pabrikan'ny alimina vita amin'ny alimina elektronika mora vidy sy mpamatsy | Ouzhan
Fizarana elektrika mihodina elektronika
Electroplating dia mizara ho plating plating, barika plating, plating mitohy ary borosy plating, izay mifandraika indrindra amin'ny habe sy ny batch ny faritra hapetraka. Ny fitoeran-dambam-baravarana dia mety amin'ny vokatra amin'ny habe amin'ny ankapobeny, toy ny môtô fiara, kodiarana bisikileta, sns. Ny plastika barila dia mety amin'ny ampahany kely, fasteners, mpanasa lamba, pin, sns. Ny plastika borosy dia mety amin'ny plating na fanamboarana ampahany.
Ny vahaolana elektroplating dia misy vahaolana asidra, alkaly ary asidra ary tsy miandany miaraka amin'ny fangaro chromium. Na inona na inona fomba plating ampiasaina, ireo fiara mifono vy sy fanantonana mifandraika amin'ireo vokatra hapetaka ary ny vahaolana plating dia tokony hanana ambaratongam-pahaizana maromaro.
Ouzhan firavaka alimina alimika electroplating fampisehoana plating:
Ny fitsipiky ny fametahana firaka aliminioma
Ny famokarana herinaratra dia mitaky famatsiana herinaratra mahery vaika ambany ho an'ny tanky elektroplating ary fitaovana electrolytic izay misy vahaolana electroplating, faritra hapetaka (cathode) ary anoda. Ny fifangaroan'ny vahaolana elektroplating dia miovaova arakaraka ny sosona plating, fa izy rehetra kosa dia misy sira lehibe izay manome ion-by, mpandraharaha manahirana izay afaka mametaka ion-by ao anaty sira lehibe hamorona sarotra, buffer iray ampiasaina hampiorenana ny pH an'ny ny vahaolana, ny activator anode, ary ny additives manokana.
Ny dingan'ny electroplating dia dingana iray izay ampidinina ny atôma vy amin'ny vahaolana vy amin'ny alàlan'ny valin'ny electrode eo ambanin'ny hetsiky ny herinaratra ivelany, ary ny metaly dia apetraka amin'ny cathode. Noho izany, ity dia dingana electrodeposition vy izay misy ny famindrana faobe, ny valin'ny electrochemical ary ny electrocrystallization.
Ao amin'ny fitoeran-drano plating misy ny vahaolana electroplating, ireo faritra nodiovina sy namboarina manokana hopetahany takelaka dia ampiasaina ho toy ny cathode, ary ny anoda dia vita amin'ny metaly nopetahany takelaka, ary ny bao roa dia mifamatotra amin'ireo electrodes tsara sy ratsy an'ny herin'ny DC manome. Ny vahaolana elektroplating dia misy vahaolana aqueous misy fitambaran-metaly mifangaro vy, sira mifehy, buffer, fanitsiana pH, ary additives.
Rehefa avy navitrika dia nihetsika nankany amin'ny cathode ny ionona vy ao amin'ilay vahaolana electroplating ambanin'ny fiasan'ny fahasamihafana mety hitranga mba hamoronana sosona plating. Ny metaly anôdaly dia mamorona ions vy ao anaty vahaolana elektroplating mba hitazomana ny fitanana ny ion-by mba hipetahaka azy. Amin'ny tranga sasany, toy ny plating chromium, dia ampiasaina ny anode tsy voavaha vita amin'ny firaka firamainty sy firamainty, izay mamindra elektronika sy mitondra ankehitriny fotsiny.
Ny fitanana ny ion chromium ao amin'ny electrolyte dia mila tazonina amin'ny fampidirana tsy tapaka chromium compound amin'ny vahaolana plating. Mandritra ny fametahana herinaratra, ny kalitaon'ny fitaovana anode, ny firafitry ny vahaolana electroplating, ny mari-pana, ny hakitroky ankehitriny, ny fotoana ilana ny herinaratra, ny hakitroky, ny fihenan'ny rivotra, ny endrika onja, sns. ara-potoana.
Amin'ny electroplating, ny makarakara tokony hopetahana dia ampiasaina ho toy ny cathode, ny metaly mitovy amin'ny metaly nopetahany dia ampiasaina ho toy ny anode (ampiasaina ihany koa ny anoda tsy voavaha), ary ny electrolyte dia vahaolana misy iôna nopetahany vy; misy ony iray ankehitriny miditra ao anode sy ny cathode.
Fampiasana Aerospace, fanamboarana sambo, fanamboarana, radiatera, fitaterana, fanodinana fitaovana mekanika, fitaovana ara-pitsaboana ary filàna isan'andro
Previous: Manoritra ampahany amin'ny alimo alimo alimo
Manaraka: Varavarana firavaka alimina alim-baravarana sy fikarakarana varavarankely